ခွေးမသားတို့ ရှေ့ဆောင်ကြီး	24Mar11
ဖဆပလက ဆရာမှိုင်းကို မလိုတမာရှိတော့ တက္ကသိုလ်က စာပြဆရာဟောင်း အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဆရာလင်းကို အမ်အေပေး ဒီလစ်ပေး တောလုပ်တောင်လုပ်လုပ်ကြတယ်။ မှိုင်းကို လင်းနဲ့ဖျောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘော။ နောက် ခင်ညွန့်လက်ထက်မှာ ဒေါ်အမာကို မကြိုက်တဲ့အခါ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဖေမိန်းမ ဝတ္ထုဆရာမ မမြတ်လေးကို ဘွဲ့တွေလျှောက်ပေးပြန်တယ်။ နန္ဒကျော်စွာ၊ ဗိုလ်ဉာဏ်ထွန်းဦး-ခင်စောဥမ္မာတို့အမေပေါ့။ ထိုက်ထိုက်တန်တန်အသိအမှတ်ပြုခံရဘို့ဆိုတာ ပေးတဲ့သူကိုယ်နှိုက်ကလဲ တိုင်းပြည်မှာ သြဇာညောင်းဘို့က လိုသေးတာ။ အာဏာရှိတိုင်းဖြစ်မှတ်လို့။ (၁)
Filed under: anniversaries, history, politics, recycled	|5Comments	5 Responses to “ခွေးမသားတို့ ရှေ့ဆောင်ကြီး”	Feed for this Entry
phoethu taw on March 24, 2011 said:
bobolansin on March 24, 2011 said:
Aung on March 27, 2011 said:
bobolansin on March 27, 2011 said:
Yes, they were good writers either but Saya Lun gotarole as the national poet or the father of Modern Burmese literature not only beacause of political supporters, he was alreadyasenior man in Burmese people before thakinhood (that is only in 1935), and Zawgyi, Minthuwun and other Khitsan poets were funs of his wisdom and poetry ( Zawgyi wrote an anthology of his letters). May Oung, Ba Han and Pe Maung Tin were more academic than writer-journalist and did not contribute much in Burmese ( I mentioned already). Hmaing was ambitious to raise the role of Burmese literature and culture in the colony and thus he gotaplace he deserved, not because of communist’s support 2-3 decades after. Shwe-U-Daung, Zawgyi, Maung Htin, Zawana, Teik-soe and several neutral and less political authors of Independence Burma already acknowledged his leadership for intellectual freedom. In 1964, Thein Pe Myint also tried to raise the role of Ledi-pandita U Maung Gyi to the Hmaing’s level to counter CPB’s promotion but he could not re-write history even though U Maung Gyi wasapucca public intellectual who introduced patriotic romance and religious literature in popular press.
Reply	« အောင်မြင်သော ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်